Yaa Is-Qarxiya ,Maxayse Isu Qarxiyaan, Yeyse Ku Qarxaan By: Osman Omar Dool | WWW.SOMALILAND.NO
Yaa Is-Qarxiya ,Maxayse Isu Qarxiyaan, Yeyse Ku Qarxaan By: Osman Omar Dool
Posted on Nofeembar 20, 2008 by Weriye2
Aniga oo ka mida dadka dareenkoodu uu sida aadka u diidan yahey in qof bini`aadam ahi uu naftiisa iyo nafo kaleba ku gooyo is miidaamin, ayaa waxaa jirta in arintaasi ay waqtii hore igu aheyd reer guuraa raac iyo caruur waa loo kala waramaa ismase arkaan. Waxey igu aheyd sheeko baraley markaan maqlo qofbaa isku qarxiyey Baqdaad, Qudis, London New.York iyo meelo kale oo fogfog, dabcan mararka qaarkood ciilka aan gaalada u qabo waaban u guuxi jirey, waxaanan is odhan jirey Ciyowgii habeen dhawaaqey wuxuu ka cawdey ayuu dareemay (Ninka is biimeyey waa nin la ciiley). Sheekadii aan aamisana iyo wixii aan isku maawelin jirey mar qudha ayey been noqdeen waxaana beeniyey markii la ii soo sheegey in Xaaji AhmedYasiin Yusuf Dhegey) oo aanu sanadkii 2000 Beyta Alle wada dawaafeyn iyo daraasiin kale oo dada oo aan badankooda hebel iyo hebelu garanaya si bilaa naxariisa ay ugu hoobteen Qaraxyadii is miidaaminta ahee 29.10.08 ka dhacey Magaalada Hargeisa, ah oo ay fuliyeen dad ku fikira sida la ii sheegey kuwa isku Qarxiya caalamka intiisa kale. Oo Hargeisa ma Yuhuud baa joogta. Miyaaney aheyn Hargeisadan marka salaada la eedamo uu Eedanka Alle is qabsado,miyaaney aheyn Hargeisdan kumaankunka caruuri quraanka subcinayaan ee sanad walba biladaha la gudoonsiyo. Hashu maankeyga gadadeye ma Maansaar bey liqdey.
Oslo,19.11.08, Marka hore ee horaameed waxaan salamaya inta si xasiloon u akhrida maqaalkan, waxa kale oo aan salmaaya tafatirayaasha ogalaadu inuu maqaalkani leydha raaco ee ka sii daaya mareegaha ay maamulaan.
Akhristow qormadani waa mid u baahan iney ka hadlaan, ama ila lafo guraan in badan oo ka mida bulshada Somaliyed, wadaad iyo waranleba, sababta taasi loogu baahan yahey ayaa ah bal in laga doodo ama si baac fog looga hadlo, sababta keenaysa, inuu qof Islaamnimo aaminsani uu isku qarxiyo meel dad bini`aadam ahi ay ku urursan yihiin isagoo aan weliba dadkaa u kala Aabo yeelin.
Aniga oo ka mida dadka dareenkoodu uu sida aadka u diidan yahey in qof bini`aadam ahi uu naftiisa iyo nafo kaleba ku gooyo is miidaamin, ayaa waxaa jirta in arintaasi ay waqtii hore igu aheyd reer guuraa raac iyo caruur waa loo kala waramaa ismase arkaan. Waxey igu aheyd sheeko baraley markaan maqlo qofbaa isku qarxiyey Baqdaad, Qudis, London New.York iyo meelo kale oo fogfog, dabcan mararka qaarkood ciilka aan gaalada u qabo waaban u guuxi jirey, waxaanan is odhan jirey Ciyowgii habeen dhawaaqey wuxuu ka cawdey ayuu dareemay (Ninka is biimeyey waa nin la ciiley). Dhanka kalena waxey aheyd Geeridu nimaanad garaneyn iyo Geeljire ayey ku wanaagsaneyd. Marka Somaliada Koonfureed aan maqlo waa lag isku qarxiyey waxaa dadka qaar aan ka rumeysan jirey markey yidhaahdaan arinta Itoobiyan Somalida iska hor keenaya yaa ka danbeeya. Hada bal qabsoo xaga diinta mar hadii aanan aqoon badan u laheyn weli intaan caalim u tagey kumaan odhan horta Sheekhow arintan maxey diintu ka qabtaa.? Sheekadaba iigumey jirin qof diinta Islaamka ee raxariista badan aamisan ayaa dad Ashahaadanaya kurta ka guraya isagoo jano baafinaya.
Mar hadii Yuhuudu Falastiiniyinta ay ka xoog badan yihiin, mar hadii ay Qudus xoog ku haystaan, mar hadii muslinkii uu awoodi waayey inuu is raaco oo uu Yuhuuda gacan gacan bira ku qabto, Alleylehe waa daw inuu wiilka Marinka Qasa jooga miino isku xidho oo dabadeed uu Yuhuud badan oo meel Baara ku sharaabeysa ku dhex hilaaco, waa firkada nafteydu ugu qiil sameyn jirey keliya qaraxyada Falastiiniyiintu fuliyaan. Malaha isagoo ku qarxaya Askar Mareykana oo dhulkoodu gardaro ku timid ayey qaraxaasi saheyda Ciraaqiyin shiciba oo aan lagu soo talo galin inuu Ismiidaamiyuhu laayo!!!!. Waa marka aan TV ka arko Ciraaq oo lagu halaagmey, Alleylehe mayee khilaafka Suniyiinta iyo Shiicada ayaa halkaa sheekada geeyay!!!!. Waa waar loo noqon.
Markey daani maaha tidhi
Maxaan talo meel ka dayey
Markey dani maaha tidhi
Ka sii deyey meel la dayey
Markey dani maha tidhi ku
Laabtey halkaan ka daayey.
Sheekadii aan aamisana iyo wixii aan isku maawelin jirey mar qudha ayey been noqdeen waxaana beeniyey markii la ii soo sheegey in Xaaji AhmedYasiin Yusuf Dhegey) oo aanu sanadkii 2000 Beyta Alle wada dawaafeyn iyo daraasiin kale oo dada oo aan badankooda hebel iyo hebelu garanaya si bilaa naxariisa ay ugu hoobteen Qaraxyadii is miidaaminta ahee 29.10.08 ka dhacey Magaalada Hargeisa, ah oo ay fuliyeen dad ku fikira sida la ii sheegey kuwa isku Qarxiya caalamka intiisa kale. Oo Hargeisa ma Yuhuud baa joogta. Miyaaney aheyn Hargeisadan marka salaada la eedamo uu Eedanka Alle is qabsado,miyaaney aheyn Hargeisdan kumaankunka caruuri quraanka subcinayaan ee sanad walba biladaha la gudoonsiyo. Hashu maankeyga gadadeye ma Maansaar bey liqdey.
Ma dagdegin jawaabtii
Docdan iyo docdaa eeg
Dabkii xaabo saarsaar
Madax diiran baaq baaq.
Weyska dagagar jiifee
Deexashu la soo kacey.
(Dibad yaal Hadraawi).
Sidii ninkii xaaskiisii oo huruda ku yidhi naa ninkii Nuur Dhegacun maxa lagu diley, ee gabadhii tidhi mooyi, ee ku yidhi hadii aanad ii sheegan waxa Nuur lagu diley intaasey xilo iga yihiin inaan adiga ku dili, ee intey naxdey, iskaga furfurtey dee malaha bixiso. Ayaan baadi doon tagey waxanan Tilifoono, iyo E,mailo kula xidhiidhey caalamka guudkiisa cidii aan aqoon bidayey oo waliba u badan Culimo diinta Islaamka ku xasishey. Waxaanan weydiiyey Cida is Qarxisa, Sabata ay isu Qarxiyaan, iyo cid ay ku Qarxaan.
Waxa la ii sheegey in cida is Qarxinta aaminsani iney yiihiin fariiqo ka mida fariiqooyinka ku kala fikirka duwan diinta Islaamka, waana fariiqo soo taxneyd ilaa xilgii asxaabta kuwaas oo loogu yeedhi jirey Khawaarijiin, iyadoo imikadana caalamka Islaamlka looga yaqaano Takfiiriyiin, oo macnaheedu yahey Gaaleysiin.
Sida aan ka soo xigtey culmi xeel dheerayaal oo aan la xidhiidhey, fariiqadaasi waa kuwii diley ee qudha ka jarey Sayid Cali Bini Abii Daalib(Radiyaluhu canhu). Sababta ay u dileena waxa ay aheyd sidan soo socota. Markii uu khilaafku ka dhex dilaacey Saxaabadii Rasuule(CSW). Sayid Cali oo dhinaca iyo Mucaawiye oo dhinaca kale ah.(Radiyalahu canhuma), ayaa waxa ay qaar ka mida asxaabtii isku dayeen in khilaafka la dhameeyo oo la isu keeno Sayid Cali iyo Macaawiye si aanu islaamku u tafraaruqin. Sayid Cali(RC) oo ka mid ahaa cashartul mubashiriin ayaa waxa uu u soo dabcey ergadii dhexdhexaadinta wadey, Waxaa markaa soo baxey in qaar ka mida Ragii Sayid Cali raacey oo ahaa Khawaarijintaasi ay arintii ka boodeen iyagoo ayaado quraanka ka mida si khadlan u fasirtey, Sayid Calina bartii ku xukumey inuu Gaalobey, mar hadii uu rag ka idin qaatey, waxaana ay halkii ku dileen Sayid Cali oo ahaa amiirkii muuminiinta ee markaas.(Nimanka Sayid Cali Gaalnimo ku xukumey maxey kula tahey Riyaale iney ku xukumayaan?)
Qarxinta waxaa so shaqsi ahaana u fuliya oo loo adeegsada 90% waa dadka dhalin yarada ah ee da`doodu u dhaxeyso 16-24 jir, dadkasi oo dabcan aaney maskaxdoodu ku fileyn, mushqaayada dadkaas loo sheego ayaa ah iney Alle dartii u dhinteen, iyagoo isla marka ay dhintaaba ay Janada Alle dhexdeeda dabaalan doonan.
Sabata ay la isu qarxinayo ayaa waxey tahey in Takfiiriyiintu ay u arkaan in aduunyadii wada Gaalowdey, in ninkii dal Islama xukuma ee la maacaamila aduunyada Gaalada ama madaxda Gaaladu, uu ku dhacey gaalnimo sidaa darteedna ay haboon tahey in qudha laga jaro. Waxaa is weydiin mudan sababta ay takfiiriyiintu u arkaan iney xaq tahey in macal dadka shicibka ah ee aan waxba galabsan lagu dhex qarxo oo dhiigooda la daadiyo. Sababta ayaa waxey culmidu ku sheegan iney tahey iyago kuwa wax Gaaleysiinaya u arkaan in mar hadii uu xukunka meesha ka jiraa Gaalo la macaamilo uu gaaloobey, dadka Shicibka ah ee xukunkaa ku hoos jira ee iska dul qaadi waayeyna ay wada gaalo yihiin oo ay banaan tahey in dhiigooda la daadiyo.
Culimada Islaamiyinta ee fikirkaa rideeyey ayaa u arka in takfiiriyiintu uu ka dhex dilaaco mar kasta khilaaf dhexdooda ah oo ah in iyaga laftoodu ay is gaaleysiiyaan. Hadii aan tusaale ku siiyo sida ay wax u gaaleysiyaan waxaan soo qaadan karaa in Sheikh Shiriif ay hada u arkaan inuu Gaal yahey taas oo ay uga qiil doonteen mar hadii uu Gaalo la xaajoodey wuu gaalobey, waxaana dhacda in qofka si hawl yar ay diinta uga saaraan isla markaana ay dhacdo in maalin kasta ay qaar iyaga ka mida ay gaaleysiiyaan kuna sheegaan iney ridoobeen.
Waxaan qoramadan ku soo gebagabeynayaa bal in hada cidii aqoon diinmeed ama mid maadiya lihi ay iksu dayaan in arintan la dildilaacayo, oo xitaa cida aaminsan iney xaq tahey in dadka lagu qarxo gaal iyo Islaamba ay fikirkooda si raganimo ku jirto u soo dhiibtan. Dabcan diintena Islamka ee suubani ee Nabiyulaahi Mohamed loo soo dhiibey ee saxda ah cida aamisani ma aha cid baqata, waxaana haboon ninkii ku doodaya waa xaq in dadka lagu qarxaa isagoo leh diinta ayaan u shaqeynaya, waa inuu badheedha oo is cadeeyo oo burhaantiisa iyo aayadihiisa si raganimo ku jirto badka u soo dhigo.
Hadii qofka is qarxinta raalida ka ahi uu mabda`iisa la dhuunto markaa waxaa sida dayax 15 ah inoo cadaaneysa inaanu qofkaasi diin shaqo ku laheyn, waayo Rasuulkii Alle lamuu gaban Diintii loo soo dhiibtey, inta uu gaaladii reer Qursheed shir isagu yeedhay ayuu ku yidhi (Qul) Waxa tidhaahdan, waxaanu qireynaa inaan Alle mooye Alle kale jirin Maxamedna waa Rasuulkii Alle(CSW). Ninkii kelmadaa tawxiidka u shaqeynaya ee is Qariya waxaan anigu ku tagey inuu beenale Argagixiso ah yahey, cidii uu ku qarxiso iyo cidii uu dilaa waa Ehelo jano, isaguna bil Cakis naarta Alle ayuu ka cabaya.
Si aaney aniga lafteyda ii gaaleysiinin Waxaan qiryaa inaanu Alle mooye Alle kale jirin, waxaanan qirayaa in Nabdi Maxamed (CSW) uu yahey Rasuulkii Alle soo direy.
Dhegeyso culimadan ka hadleysa mawduucan laftiisa
1 »» Bayaan Ku saab takfiirka iyo qaraxyada oo ka soo fulay Hay’adda Kibaarul culumaa 1aad
2 »» Bayaan Ku saab takfiirka iyo qaraxyada oo ka soo fulay Hay’adda Kibaarul culumaa 2aad
Sh. Cabdikariim Xasan Xoosh
3 »» Bayaan Ku saab takfiirka iyo qaraxyada oo ka soo fulay Hay’adda Kibaarul culumaa 3aad
4 »» Bayaan Ku saab takfiirka iyo qaraxyada oo ka soo fulay Hay’adda Kibaarul culumaa 4aad
Allow eex ma tiraabin ee aqoon ha igu cadaabin.
Filed under: Norge, Ukategorisert |
« Tacsi katimid xafiiska Somaliland ee Norway Boka «Se oss» av den anonyme forfatteren Amal Aden inneholder injurierende og urettferdige beskyldninger. Og den gjør integrering av somaliere vanskeligere. »